पार्टी होइन, गुट बलियो बनाउने कांग्रेसी राजनीति
Thursday, 29 Nov, 2018 2:55 PM
पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना बढेसँगै कोइराला परिवारका सदस्यहरू सुजाता कोइराला, शशांक कोइराला र शेखर कोइरालाहरूको सक्रियता ह्वात्तै बढ्यो । उनीह?को सक्रियता आगामी १४औं महाधिवेशन लक्षित छ । उदेश्य प्रष्टै छ– अवको सभापति कोइराला डाइनेष्टीबाट । देउवापक्षले यो कुनै हालतमा हुन नदिने नीति लिएको छ । त्यसैले अव कांग्रेस राजनीति पार्टी होइन, गुटमा थप केन्द्रित हुनेछ ।
टिप्पणी/ दिनेश घिमिरे
काठमाडौं, १३ मंसिर– काग्रेसको संशोधित तथा परिमार्जित विधान मस्यौदामाथि छलफल गर्न आज (बिहीबार) केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ । बैठकअघि सभापति देउवा पक्ष र विरोधी पक्षका गुटगत भेला बोलाइएकाले दुई खेमाबीच चर्काचर्की हुने सम्भावना छ ।
यसअघि मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म हुने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिने संशोधित विधानको मस्यौदा अध्ययन गर्न केन्द्रीय सदस्यह?लाई तीन दिनको समय दिइएको थियो । मस्यौदा समितिले प्रस्तुत गरेको संशोधित विधानमा रहेका विवादित विषयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले छलफलको माध्यमबाट सहमति जुटाउने प्रयास गर्नेछ ।
सहमति जुटाउन नसकेका विषय महासमितिमा लगिने छ । यसैबीच केन्द्रीय समितिमा विधान छलफल हुनुअघि काँग्रेसका सभापति देउवा पक्ष र रामचन्द्र पौडेल पक्षले छुट्छुट्टै गुटगत भेला गरेका छन् । केन्द्रीय बैठक बस्नु अघि नेतृ सुजाता कोइरालाको घरमा मंगलबार र महामन्त्री शशांक कोइरालाको घरमा बुधबार बसेको बैठकमा सभापतिविरूद्घ खुलेर जानेवारेमा छलफल भएको बताइन्छ ।
पछिल्लो समय काँग्रेस पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना बढेसँगै कोइराला परिवारका सदस्यहरू सुजाता कोइराला, शशांक कोइराला र शेखर कोइरालाहरूको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ । उनीहरूको सक्रियता आगामी १४औं महाधिवेशन लक्षित भएको धेरै काँग्रेस नेता कार्यकर्ताको विश्लेषण छ । यद्यपि उनीहरूले भने महाधिवेशनबारे नसोचेको बताएका छन् ।
रामचन्द्र पौडेल बरिष्ठ नेता भएपनि पछिल्लो समयमा देउवाविरोधी समूहको बैठक या छलफल हुँदा सुजाता, शशांक या शेखरको घरमा मात्रै हुने गरेको छ । १३ औं महाधिवेशनमा देउवालाई सहयोग गरेका नेताहरू पनि पछिल्लो चरणमा देउवा विरोधी खेमामा एकीकृत हुँदैछन् । त्यसका एक उदाहरण हुन, नेता चन्द्र भण्डारी । भण्डारी १३ औं महाधिवेशनमा देउवाको प्यानलमा थिए । त्यसका अलवा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, नेताह? डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसीलगायतका असन्तुष्ट नेताहरू पनि कोइराला परिवारलाई साथ दिइरहेका छन् ।
खासगरी गतवर्ष भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले हार बेहोरेसँगै देउवाप्रति आक्रोशित बनेका यी नेता पछिल्लो पटक विजयकुमार गच्छदारलाई पार्टी उपसभापति बनाएपछि थप चिढिएका हुन । यही समिकरण कायम रहे आगामी महाधिवेशनमा देउवावि?द्ध शशांक वा शेखरमध्ये एक सभापतिमा उम्मेदवार बन्ने र पौडेलले समेत सहयोग गर्ने मनस्थिति बनाएको चर्चा छ । देउवाविरोधी बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफू निकट नेता तथा पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । उक्त भेलामा समूहका नेताहरूले भने सभापति देउवाले विभिन्न निर्णय गर्दा पेलेरै जाने गरेको भन्दै आफूहरूले पनि विधानलाई पास गर्न नदिने अडान राख्नुपर्ने बताएका थिए । विधानका कतिपय बुँदा परिमार्जन नगरी हुन्न उनीह?ले यसै बिषयमा समान धारणा राख्न छलफल गरेका थिए ।
उता काँग्रेसका जिल्ला सभापतिह? नुवाकोटमा भेला भएका छन् । उनीह?ले समेत विधानका कतिपय विषय परिमार्जन गर्न केन्द्रीय समितिलाई दवाव दिएका छन् । जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा बोल्ने अधिकांशले पार्टीका तल्ला तहलार्ई अधिकार सम्पन्न बनाउन माग गरेका छन् ।
भेलामा सहभागी यी नेताह?ले कांग्रेसको विधान समयसापेक्ष हुन नसकेको तथा सभापति देउवाले आफू अनुकुलको विधान बनाउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै त्यस्तो विधान केन्द्रीय समितिबाट पास गर्नै नहुने निचोड निकालेका छन् । मङ्गलबारको बैठकमा युवापुस्ताका धेरै नेताहरू सहभागी थिए भने बुधबार महामन्त्री कोइरालाको टोखास्थित घरमा भएको भेलामा रामचन्द्र पौडेलसहित देउवाइतर पक्षका सबै नेता सहभागि थिए । भेलामा उनीह?ले ‘विधान नै नेता अनुकुल बनाउने हो भने पार्टी किन चाहियो ? भन्दै विधानको विाषयमा असहमति रख्ने निचोट निकालिएको बताइन्छ ।
उनीह?ले नेताह? स्वार्थी र आत्मकेन्द्रित बन्दा काँग्रेसको साख गिरेको भन्दै त्यस्तो विधान केन्द्रीय समितिबाट पास गर्न नदिने बताएका छन् ।
महाधिवेशनको चर्चा चलिरहेको बेला नेताहरू गुट, उपगुटमा विभाजित हुनुले काग्रेंसको संसोधित विधान मस्यौदामा समेत व्यापक मतभेद देखिएको छ । मुख्ययगरी कग्रेंंसको मस्यौदामा सदस्य संख्या बढाउने तर पदाधिकारी नबढाउने, सभापतिले २५ प्रतिशत सदस्य मनोनयन गर्न पाउने, क्रियाशिल सदस्यता खारेज गर्ने, समानुपातिक प्रणालीमा एक व्यक्ति जतिपटक पनि उम्मेदवार बन्न पाउने भन्ने लगायतका विवाद छन् ।
त्यस्तै विधानमा विकल्पसहित प्रस्ताव गरिएको सदस्यताको प्रकृयामा पनि धेरै काँग्रेस नेताह?ले असहमति जनाएका छन् । प्रस्तावित विधानमा क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्ने विषयको पनि बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशममान सिंह र कृष्ण सिटौलालगायतका नेताह?ले विरोध गरेका छन् । त्योबाहेक समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत एक व्यक्ति जतिसुकै पटक उम्मेदवार बन्न पाउने प्रावधानले पनि अन्य व्यक्तिले अवसर नपाउने भएकाले त्यो बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरू रहेका छन् । विधान मस्यौदामा सदस्य सङ्ख्या बढाएर एक सय ४१ बनाउने तर पदाधिकारी नबढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसै विच विधान संशोधन मस्यौदाको पक्षमा समान धारणा बनाउने भन्दै बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत आफू निकट पदाधीकारी र केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गरेका थिए । संस्थापन पक्षको भेलामा सभापतिलाई मनोनयन सहज बनाउनुपर्ने माग उठेको बताइन्छ ।
गत मंसिर ९ गते बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिले पेश गरेको विधान तीन दिनसम्म केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको थियो । विधान सार्वजनिक भएसँगै कन्द्रीय नेताहरू गुट भेलामा सक्रिय भएका छन् ।